Kwaholela Downlight, Kwaholela Down Khanyisa, Dimmable Downlight - ekhazimulayo
Ekhazimulayo downlight yasekhaya ukhathalela ukuphila kwabantu kuyo yonke emhlabeni futhi ezahlukene amazwe. Fire ukalwe downlight kwenza ophilayo ephephile. Sitsheke futhi variable ugongolo engela ukubeka downlight nokubheka ukukhanyisa ukuze abaqondise endleleni efanele. IP65 downlight kungavimbela amanzi okusezingeni eliphezulu nomswakama Ukungena. RA lolusetulu CRI baziphilisa lakho langempela ngaphezulu. Okuphansi ukukhanya ukukhanya kwenza enempilo ukukhanya. ngemali ephansi futhi bakha imizila edingekayo yokwenza lula ukwenza isitatimende sakho kancane.
CCT futhi Bezel okungashintsheka
IP65 & Nyakazisa
Screwless & LOP IN / OUT uxhumano
Variable Beam engela Setting e isibani eyodwa
CCT ushintsho + Dim ukuba Warm abahlelela isibani eyodwa
Ekhazimulayo downlight commercial iwela amabanga amabili ukuhlangabezana nezidingo emakethe ezahlukene - isabelomali futhi uNdunankulu. Lezi nokufakwa kukhona esikhundleni designable ka CFL futhi PL ukukhanya. Ngenxa eside ukukhanyisa isikhathi endaweni ekhethekile esetshenziswa, ekhazimulayo downlight commercial linikeza iminyaka 5 sesiqinisekiso futhi unikele ongakhetha umsebenzi variable ngaphezulu isibani eyodwa. Futhi ezahlukene optic inketho banganikeza umsebenzisi ukukhetha eziningi ukukhanya yesehlakalo design.
CCT Kuyashintsheka e isibani eyodwa
ongakhetha optic Multi (relector + lens + uma liqhathaniswa nezibani)
Triac, uDali & ongakhetha Ukufiphala 1-10v
Ekhazimulayo smart downlight kulawulwa nge APP usebenzisa ubuchwepheshe be-Bluetooth. Ukuze ungangihluphi kakhulu abantu ukukhathazeka ngokuntuleka ukulawula esingesihle noma ifoni olahlekile, sinalo odongeni inkinobho ukufanisa. Ubuchwepheshe bamuva kwenza downlight yethu smart kuphatheke kwabanye uhlelo. Ngaphandle kokulawula, umsebenzi enamandla kwesibani uyisidalwa. It has ukukhanya main futhi halo ukukhanya okumhlophe futhi RGB okuyinto efanelekayo zokusebenza ezahlukene. Nge ekhazimulayo smart downlight, ungenza isibani suit isimo semizwa yakho nganoma isiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi lapho e-touch of ifoni.
Independent ukukhanya main futhi halo ukulawula ukukhanya
Umbala ogcwele nokulawula ukugqama
Thinta facia ebucayi
Obungenawaya be-Bluetooth waqhweba iqembu ukukhanya
Ihambisana nawo D1 & C1 umkhiqizo ukufaka okuxubile
Ukukhanyisa ekhazimulayo professional design engineering Emacembu etfu angasebenta ukudala imikhiqizo ngokwezifiso ezenza amakhasimende ukuhlukanisa encintisana futhi sifinyelele inani eliwumkhawulo izimakethe zabo zendawo. multi-lingual kwamakhasimende abaphathi umsebenzi wethu ukuqonda ngokunembile nezidingo wonke amakhasimende futhi ukuhlinzeka umkhakha ehola amazinga okusebenza ngaphambi, phakathi nangemva izinkontileka ephelele.
Uchwepheshe ODM Umthengisi we LED Downlight Imikhiqizo
Amadivayisi: Jiatai Road West, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiang su, China
Ifoni: + 86-0512-58428167